ဖာရာရီလမ်းခွဲ – Pann Satt Lann Books
ငါတို့စာပေ၊ 2018 နိုဝင်ဘာလ (ပ-ကြိမ်)
ဖာရာရီလမ်းခွဲ အား ဝေဖန်သုံးသပ်မှု4ရှိပါသည်။
Aye Myint Moe – November 22, 2020
နာမည်က * ဆရာမိုးရှင်း ( I.M.T) ရဲ့ ဖာရာရီလမ်းခွဲ * ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပေါ့၊ ကိုယ် ဒီနာမည်ကိုစတွေ့တော့ ဖာရာရီလို့အမည်ရတဲ့လူတစ်ယောက်က သူ့ရဲ့ချစ်သူနဲ့လွမ်းခွဲရတဲ့အကြောင်းလို့ထင်ခဲ့မိတာ ဒါပေမယ့် မဟုတ်ခဲ့ဘူး။ လမ်းခွဲတာတော့ဟုတ်တယ် သူဘယ်လိုအရာတွေကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့လမ်းခွဲခဲ့လဲဆိုတော့….
* ဂျူလီယန်မန်တဲလ်* ဆိုတဲ့ရှေ့နေကြီးတစ်ယောက် အလုပ်တွေအရမ်းကြိုးစားပြီးအောင်မြင်မှုနောက်ကိုယ်ပဲလိုက်နေတဲ့ နာမည်ကြီးရှေ့နေတစ်ယောက်က တစ်နေ့တရားရုံးအလည်မှာ လဲကျသွားရာကအစပြု့ခဲ့တယ်၊ မိသားစု၊ အပေါင်းသင်းထပ် အလုပ်မှာပဲအမြဲအလေးပေးတဲ့အခါ စိတ်ညစ်မှုတွေ ဖိအားတွေ ပူပန်မှုတွေရရှိလာတဲ့အကျိုးဆက်ကတော့ ဆေးရုံကိုယ်ရောက်သွားခြင်းပါပဲ။
အဆိုးထဲကအကောင်းတစ်ခုကတော့ သူရဲ့အခုလိုဖြစ်ပျက်သွားခြင်းအပေါ် စိတ်သစ်ကိုယ်သစ်နေနိုင်ဖို့ဘဝသစ်ကိုရှာဖို့အတွက် ဆေးရုံကဆင်းသွားတာ ၃နှစ်ကြာပြီးနောက် အပြောင်းအလဲပုံစံသစ်နဲ့ပြန်ရောက်လာခဲ့တဲ့ ဂျူလီယန်က သူရဲ့တွဲဖက်ရှေ့နေဖြစ်တဲ့ ဂျွန်ကိုယ် သူကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ကြောင်း ကုန်စင်ကိုပြန်လည်ပြောပြထားတဲ့အကြောင်းပေါ့။
ရက်ပေါင်းများစွာခရီးရှည်တစ်ခုကိုဖြတ်သန်းပြီးနောက် သူတော်စင်တစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီး သူတို့နေထိုင်ရာဒေသကိုရောက်ရှိပြီးနောက် သူတော်စင်ရာမန်ဆီက သင်ယူလေ့လာခဲ့ရတဲ့အတွေ့ကြုံတွေကိုပြန်လည်ပြောပြခဲ့တယ်၊ သူပြောခဲ့တာ ပုံပြင်ခပ်တိုတိုလေးတစ်ပုဒ် အဲ့ဒီပုံပြင်ကိုသိပြီးတော့ ဂျူလီယန်ပြောတာကိုနာထောင်းတဲ့ ဂျွန်ကစိတ်ပျက်သွားတယ်လို့ပြောတယ် အဲ့ပုံပြင်ဖတ်ပြီးတဲ့ကိုယ်လည်း ဟာဘယ်လိုကြီးလဲဆိုပြီးခံစားလိုက်ရတယ်၊ ဒါပေမယ့် ထိုပုံပြင်ထဲမှာလူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့အချက် ၇ချက်ပါဝင်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကို ဂျူလီယန်က အသေးစိတ်ရှင်းလင်းမြင်သာအောင် ပြန်လည်ပြောပြခဲ့တယ်၊ ထိုအချက်လတ်တွေကတော့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝဖြတ်သန်းပုံ နေထိုင်ပုံ စိတ်ပြု့ပြင်ပြောင်းလဲသင့်ပုံကို ချက်နဲ့လက်နဲ့ရေးသားထားသလို၊ ကိုယ်တွေပေးပေးနေတဲ့ဆင်ခြင်ဆင်လတ်တွေဟာ လူတစ်ယောက်ကိုဘယ်လောက်တောင်မှပျက်ဆီးစေလဲဆိုတာကို ရေးသားထားတာမို့ ကိုယ်ဟာအတွေးများသူလား၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ဟာ ဆင်ခြင်ဆင်လတ်တွေပေးတက်သူတစ်ယောက်လို့ထင်ရင် ဒီစာအုပ်လေးကိုဖတ်ကြည့်ပါ…အသိတစ်ခုခုရလာပါလိမ့်မယ်၊ ဒီထက်ထူးချွန်မယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ ဂျူလီယန်လို့တောင် ပြောင်းလဲလာပါလိမ့်မယ်။
Mi Shwe Yee Win Htet – November 24, 2020
♻ ဒီစာအုပ်ခေါင်းစဥ်ကိုကြည့်လိုက်ရင် လမ်းခွဲတဲ့အကြောင်းတွေအချစ်အကြောင်းတွေလို့
ထင်ရပေမဲ့ တကယ်တော့ ဖာရာရီဆိုတာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ တန်ဖိုးအရှိဆုံးကားတစ်စီးပါ။
♻စာအုပ်ထဲမှာဆိုရင်အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ဂျူလီယန်ဟာ သူ့ရဲ့တန်ဖိုးအရှိဆုံးအရာဖြစ်တဲ့ဖာရာရီကားကိုရော ၊သူချစ်မြတ်နိုးတဲ့မိသားစုကိုရော၊သူအရမ်းခင်တွယ်တဲ့ရှေ့နေအလုပ်ကိုရော စွန့်လွတ်နိုင်ပါသလား။
♻ နောက်ဆုံး သူဟာ ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာဖို့
သူဘယ်လိုရရှိခဲ့သလဲ ဆိုတာကို ဂျူလီယန်က ဂျွန်ဆိုတဲ့သူငယ်ချင်းနှင့်အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြီး ပြန်ပြောပြနေတဲ့အကြောင်းအရာကို စိတ်ဝင်စားစရာ နှင့်ရေးသားပုံဖော်သွားတဲ့စာအုပ်ကောင်းလေးပါ။
? အကျဥ်းချုပ်ပြောရရင် စာရေးသူကိုယ်စား ဂျူလီယန်ပေးချင်တဲ့ messageကတော့
-၁ ။ကိုယ်စိတ်ကို ဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲ?
-၂ ။ ကိုယ်ရဲ့ဘဝရည်မှန်းချက်တွေကို ဘယ်လိုရှာဖွေမလဲ?
– ၃ ။ကိုယ်ရဲ့ဘဝနေ့စဉ်တိုးတက်ဖို့ကိုဘယ်လို လုပ်ဆောင်မလဲ?
-၄ ။ စည်းကမ်းရှိစွာကိုယ့်ဘဝကို ဘယ်လိုသွားမလဲ။
– ၅ ။ အချိန်ကို လေးစားတတ်ခြင်း
– ၆။ ကိုယ်ကျိုးမကြည့်ဘဲ အခြားသူများကို ကူညီပါ။
– ၇။ ပစ္စုပ္ပန်မှာနေထိုင်ပါ။
✅ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးကတည်း က ပြောင်းလဲလာပါတယ်။အဓိက ပျော်ရွှင်မှုကိုပဲရှာချင်လာတော့တယ်။
? ပျော်ရွှင်မှုကို ဂျူလီယန်လိုမျိုးမရှာဖွေနိုင်ခဲ့ရင်တောင်မှ ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီး ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ?
Shinmin Thadar – December 23, 2020
အရမ်းဖတ်လို့ကောင်းပြီး တန်ဖိုးရှိတဲ့ စာအုပ်လေးမို့ ဖတ်ရကျိုးနပ်ပါတယ်ရှင်???
Thinzar Lwin – January 22, 2021
ဒီစာအုပ်ထဲမာ ဆရာက ဘဝမာဘာတေလိုအပ်တယ် ဘယ်လိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကို ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ပြောပြပြီး နားလည်လွယ်အောင် ဘာသာပြန်ပေးထားပါတယ် ပုံပြင်ထဲက အကြောင်းအရာတေကို တစ်ခုဆီဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ သေချာရှင်းပြပြီးဘာသာပြန်ပေးထားတဲ့အတွက် နားလည်လွယ်ပါတယ် ရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတေကို သေချာလိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင် စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး ဘဝမာ ပျော်ရွှင်မှုတေရမယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ် လူတိုင်းဖတ်သင့်ပြီး တန်ဖိုးရှိတဲ့စာအုပ်လေးပါ